तिर्खा : देश बाहिरको अनुभूति - प्रवीण बानियाँ (नागरिक दैनिक )
देश बाहिरको अनुभूति - प्रवीण बानियाँ (नागरिक दैनिक )
देशका सपना–विपना, सुख–दुःख पनि उनीहरूसँगै जान्छन्। यो देशको भाग्य र भविष्यको ठूलो हिस्सा पनि सँगै जान्छ। र, ती युवाहरू विदेशमा गएर पैसासँग आफ्ना सपना–रहरहरू विनिमय गर्छन्। यही यथार्थ बोकेका बलिया कथाहरू पढ्न पाइन्छ, ‘तिर्खा'मा। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा ‘तिर्खा' देशबाहिरको श्रमबजारमा बाँचिरहेको सानो नेपाल हो।
यौन अन्त्यहीन र नितान्त प्राकृतिक भोक हो, यसमा फरक मत नहोला। सम्बन्धमा समझदारी बन्छ भने यौनको भोक जहाँ र जहिले पनि परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। यौनको भोक मेट्नका लागि कुनै वैधानिक सम्बन्ध नभए पनि फरक पर्दैन भन्ने कुरालाई छुट दिएको छ, कृतिको शीर्ष कथा ‘तिर्खा'मा। बहुसंख्यक कथामा इजरायल स्थान विशेषका रूपमा बारम्बार दोहोरिएर आएको छ। प्यालेस्टाइन र इजारायलबीचको राजनीतिक द्वन्द्वको पृृष्ठभूमि र द्वन्द्वोत्तर समाजमा अघि बढिरहेको दुई देशीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अवस्था र त्यसले सिर्जना गरेका थुपै्र घटनाक्रम कथाहरूमा सहायक विषय बनेर आएका छन्। त्यसैगरी, नेपाली युवा देशबाहिर रहँदा कसरी त्यहाँको परिवेशसँग मिल्छ, अतिरिक्त सम्बन्ध कसरी सुरु हुन्छन्, कुन रूपमा विकसित हुन्छन् र कसरी अन्त्य हुन्छन् भन्ने कुरा पनि केही कथामा विषय बनेका छन्। अतः कृतिभित्रका बहुसंख्यक कथा डायस्पोरिक जीवनशैली र त्यससँग रोकार राख्ने अन्य पक्ष परिपरि घुमेका छन्।
पुरानो ‘फर्म्याट'का कथाहरू पढ्दै आइरहेका पाठकका लागि कृष्णपक्षका कथा नयाँ लाग्छन्। उनी कथामा फरक चरित्र देखाउन रुचाउँछन्। त्यसले कथाकारितालाई कुनै न कुनै रूपमा उज्यालो थपेकै छ। कथामा परम्परागत अनुशासन र दायरालाई अनिवार्य नठानी फरक शैली प्रस्तुत दिन खोजेको देखिन्छ। उनका कथामा पाइने एउटा विशेषता उनी निर्माण गर्दागर्दै कथामा कविता लेखिसक्छन्। कविताको सौन्दर्य कथाहरूमा पोखिसक्छन्। र, कथालाई कविताजस्तो बनाइदिन्छन्। आफूले भन्न चाहेको कुरा सुकिला विम्ब समातेर भनिदिन्छन्। उनका कथाहरु पढ्दै जाँदा कथा कम र बढी कविता पढेझैं लाग्छ।
अंग्रेजी साहित्यको ‘नन् फिक्सन राइटिङ'मा पाइने विविध कलेवर विषयको प्रभाव कृष्णपक्षका कथामा पाइन्छन्। यिनका कथामा अंग्रेजी साहित्यका १८/१९ औं शताब्दीका प्रसिद्ध कथाकार र कथाको चित्र पनि भेटिन्छ। भलै, सिर्जनाको प्रभाव पर्छ। नत्रभने कवि, लेखकका पछाडि संसार किन लाग्ने? सिर्जनाका माध्यमबाट आम मानिस र जगतले आफ्ना दुःख र पीडालाई सुख र आनन्दमा रूपान्तरण गर्न सक्दैन भने उनीहरूका रचना किन पढ्ने? कृष्णपक्षका कथाले पाठक हृदयलाई छुँदैनन्, आम मानिसलाई सुखद् अनभूति दिलाउँदैनन् भने उनका कथाको पछि किन लाग्ने?